war xasaasi ah:Hogaamiyaal sare Alshabaab ah oo gacanta lagu dhigtay…. – idalenews.com
war xasaasi ah:Hogaamiyaal sare Alshabaab ah oo gacanta lagu dhigtay….
Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u tababaran ee Kumandoska ayaa Xalay howlgal qorsheysan ka sameeyey degaano ka tirsan gobolka Sh/hoose oo ay ku sugan yihiin Xoogaga Al-Shabaab.
Howlgalkan oo sidoo kale ay taageerayeen ciidamada Maraykanka ayaa waxaa uu ka dhacay degmada Aw-Dheegle ee gobolka Sh/hoose oo muddo badan Al-shabaab gacanta ugu jiray iyo degaano kale.
Inkastoo aan faahfaahin badan laga helin qaabka uu u dhacay howlgalkan ayaa haddana Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Sh/hoose C/fitaax Xaaji Cabdulle waxaa uu sheegay in lagu guuleystay soo qabashada hogaamiyeyaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab.
“Saraakiisha sare ee lagu soo qabtay howlgalkan waxa labo nin oo muhiim ah, waxayna kala yihiin Cabdi-kariin Abuu Xamza oo ah Madaxa Al-Shabaab u qaabilsan Maaliyadda iyo Shiikh Muudey oo ah taliyaha u qaabilsan Amniyaatka iyo dilalka qorsheysan, laguna soo tababaray dalka Afghanistan” ayuu yiri Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Sh/hoose.
C/fitaax Xaaji Cabdulle ayaa intaas ku daray in hogaamiyeyaashan oo muddo lagu raad joogay ay ka dambeysay soo qabashadooda xog laga helay dadka degaanka, wuxuuna xusay in lagu hayo xarumaha ciidamadu ku leeyihiin gobolka Sh/hoose, laguna wareejin doono Ciidanka Nabad sugida iyo sirdoonka Qaranka.
Howlgalku ayuu sheegay C/fitaax Xaaji Cabdulle inuu weli ka socdo degaano ka tirsan gobolka Sh/hoose laguna raad joogo saraakiil kale oo ka tirsan Al-Shabaab.
Safiirka Qatar oo deg deg u soo magacaabay Soomaaliya Safiir awoodiisa dhameystiran tahay